Keen batoonka aan shaqaynayn
Keen batoonka aan shaqaynayn 1 sano 2 bilood ka hor #1396
Badhanka badhanka ma shaqeynayaan.
Keen batoonka aan shaqaynayn 1 sano 2 bilood ka hor #1398
Waa maxay nooca shabakadda Internetka? Haddii aadan na siin macluumaad kasta annagu kuma caawin karno.
Dhulbaaxo farxad leh
Keen batoonka aan shaqaynayn 1 sano 2 bilood ka hor #1399
Keen batoonka aan shaqaynayn 1 sano 2 bilood ka hor #1400
Markaa maxaa dhacaya markaad gujiso download? Ma jiraan daaqado yaryar oo furan?
Keen batoonka aan shaqaynayn 1 sano 2 bilood ka hor #1401
Waxba ma dhacaan. Daaqad kale, ma jiraan. Horaanba lagasoo degay, laakiin dhawaantan waxaan lahaa tijaabintan. Ma hubo haddii ay sabab u ahayd cusboonaysiinta Firefox, ama waxa.
Keen batoonka aan shaqaynayn 1 sano 2 bilood ka hor #1403
Waxaan imtixaan la sameeyay qaabkii ugu dambeeyay ee Firefox oo ahaa mid wanaagsan, daaqadaha ayaa kor u kacay. Waxaa laga yaabaa in aad iska hubiso haddii spam-ka-horjoogsiga ama xayir-xayeysiistu aysan ahayn xannibista daaqadaha. Sidoo kale isku day inaad isticmaasho Chrome, haddii ay la shaqeyso Chrome ka dibna waxay u badan tahay inay dhibaato ku tahay Firefox.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.215